November 17, 2008 at 6:29 pm Leaveacomment
विश्वमा थुप्रै अद्भूत रोचक र अनौठा वस्तुहरू पाइन्छन् । यसमध्ये कुनै स्पष्टरूपमा देखिन्छन् भने कुनै किम्वदन्ती र अन्धविश्वासका रूपमा रहेका हुन्छन् । वास्तविक धरातलमै आइसकेका कतिपय वस्तुले सबैलाई चकित पारेको हुन्छ । कतिले आङै जिरिङ-जिरिङ पार्दै रोमाञ्च, कौतुहलता र जिज्ञासा समेत बढाउँदै विश्वमा कतिपय दुर्लभ वस्तुहरू रहस्यकै गर्भभित्र लुकिरहेका छन् । यस्तै रहस्यभित्र रहेको र हाम्रो देशमा मात्र पाइने अर्को कौतुहलको विषय हो- हिममानव अर्थात् यती । यतीको चर्चाले नेपाल अहिले आकर्षण र जिज्ञासाको केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ । अहिले यो हिममानव यतीको खोजी, अध्ययन र अन्वेषणमा श्रम, शक्ति खर्च भइसकेको छ तर पनि यसको वास्तविक स्थिति र पहिचान अझै बाहिर आउन सकेको देखिँदैन ।
(साभार – गोरखापत्र )
Entry filed under: रोचक कुरा, japan, mysteries, Nepal.
जगदिश दाइको अन्तमर्न	Thomas Beatie(Man) Pregnant Again ??